I-Hydralazine HCL powder (304-20-1) hplc =98% | Yenza ama-Reagents we-R & D
/ Imikhiqizo / Ama-Reagents e-R & D / Hydralazine HCL powder
SKU: 304-20-1. Isigaba: Ama-Reagents e-R & D
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya kwe-mass order ye-Hydralazine HCL powder (i-304-20-1), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Hydralazine HCL powder i-vasodilator esebenza ngokuphumula imisipha emithanjeni yakho yegazi ukuze ibasize bahlanza (bavule). Lokhu kwehlisela ukucindezeleka kwegazi futhi kuvumela igazi ukuba ligele kalula kalula ngemithanjeni yakho nemithambo.
I-Hydralazine hydrochloride powder ividiyo
I-Hydralazine HCL powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Formula Yamamolekhula: C8H9ClN4
I-Melt Point: I-280-282 ° C
Hydralazine hydrochloride powder ekusetshenzisweni
Amagama Okugqoka: I-Apresoline
Igama elijwayelekile: i-Hydralazine HCL powder (Ukubizwa ngegama: hye DRAL a zeen)
Ukusetshenziswa kwe-Hydralazine HCL powder
I-Hydralazine HCL powder isetshenziselwa ukuphatha umfutho wegazi ophezulu. I-Hydralazine hydrochloride powder iseklasini lemithi ebizwa nge-vasodilators. Kusebenza ngokuphumula imithwalo yegazi ukuze igazi likwazi ukugeleza kalula emzimbeni.
Umfutho wegazi ophezulu yisimo esivamile futhi uma ungaphathwa, kungabangela umonakalo ebuchosheni, enhliziyweni, emithanjeni yegazi, ezinsweni nezinye izingxenye zomzimba. Ukulimala kulezi zitho kungabangela isifo senhliziyo, ukuhlaselwa yinhliziyo, ukwehluleka kwenhliziyo, ukushaya isifo, ukwehluleka kwezinso, ukulahlekelwa umbono, nezinye izinkinga. Ngaphandle kokuthatha imithi, ukwenza izinguquko zokuphila kuzosiza nokulawula ukucindezeleka kwegazi. Lezi zinguquko zihlanganisa ukudla ukudla okunamafutha aphansi kanye nosawoti, ukugcina isisindo esinempilo, ukusebenzisa okungenani imizuzu ye-30 izinsuku eziningi, ukungabhemi nokusebenzisa utshwala ngokulinganisela.
Iyiphi isilinganiso se Hydralazine hydrochloride powder
Ukushisa ngokweqile kweziguli ezikhulile:
Qala ukwelashwa ngesilinganiso esincane futhi ukwandise kancane kancane ngokususelwa ekuphenduleni kwesinye isiguli. Okujwayelekile okuphakanyisiwe ukuthi uqalise irejistini ngu-10 mg ngomlomo izikhathi ezine ngosuku ngosuku lokuqala lwe-2 ezinsukwini ezingu-4, ukwandisa ku-25 mg izikhathi ezine ngosuku ngalunye lwesonto lokuqala.
Kwamaviki wesibili kanye alandelayo, ukwandisa umthamo ku-50 mg izikhathi ezine ngosuku (ukwandisa umthamo nge-10-25 mg / umthamo kancane kancane zonke izinsuku ze-2-5).
Isilinganiso esiphezulu sezinsuku zonke ezisetshenziselwa izifundo zokwelashwa ngu-300 mg.
Ukuhluleka kwenhliziyo ukukhumula:
Isilinganiso sokuqala sokuphatha ukuhluleka kwenhliziyo yi-10 ku-25 mg ngomlomo 3 izikhathi ezingu-4 nsuku zonke.
I-dose evamile yi-225 ku-300 mg nsuku zonke ku-3 kuya ku-4 amanani ahlukanisiwe.
Ngeziphuthumayo zegazi ezisemakhaya, umthamo yi-0.5 mg / Kg IV njalo amahora we-4.
Indlela i-Hydralazine HCL powder isebenza ngayo
I-Hydralazine HCL powder isetshenziselwa ukuphatha umfutho wegazi ophezulu (umfutho wegazi ophezulu). Ibuye isetshenziselwe ukulawula ukucindezelwa kwegazi eliphezulu kumama ngesikhathi sokukhulelwa (pre-eclampsia noma eclampsia) noma ezimweni eziphuthumayo lapho ukucindezeleka kwegazi kuphezulu kakhulu (hypertensivecrisis).
Umfutho wegazi ophakeme ungeze ekusebenzeni kwenhliziyo nemithambo yegazi. Uma iqhubeka isikhathi eside, inhliziyo nemisipha ingase ingasebenzi kahle. Lokhu kungenza imithwalo yegazi e-damagethe yobuchopho, inhliziyo, nezinso, okubangelwa ukushaywa yisifo, ukuhluleka kwenhliziyo, noma ukwehluleka kwezinso. Ukuncipha kwengcindezi yegazi kungandisa ingozi yokuhlaselwa yinhliziyo nokushaya.
I-Hydralazine hydrochloride powder isebenza ngokuphumula imithwalo yegazi futhi ikhulise ukunikezwa kwegazi ne-oxygen enhliziyweni ngenkathi kunciphisa umthwalo wayo wokusebenza.
Akufanele usebenzise le mithi uma uthola usizo lwe-Hydralazine hydrochloride powder, noma uma une-coronary artery disease, noma isifo se-rheumatic heart affecting valve mitral.
Ngaphambi kokuthatha i-Hydralazine HCL powder, tshela udokotela wakho uma unesifo sezinso, i-lupus, i-angina pectoris (ubuhlungu besifuba), noma uma uke waba nesifo sohlangothi.
Ngenkathi uthatha i-Hydralazine hydrochloride powder, gwema ukuvuka ngokushesha kakhulu endaweni ehlezi noma elele, noma ungase uzizwe unesizungu. Vuka kancane futhi uzinze ngokwakho ukuvimbela ukuwa.
Shayela udokotela wakho ngesikhathi esisodwa uma unomphumela ojulile wezinhlangothi ezifana nokushaya noma ukushaya izinhliziyo, ukuvuvukala, ukuphazamiseka noma ukumboza, umchamo obumnyama, ubuhlungu obuhlangene noma ukuvuvukala ngomkhuhlane, ubuhlungu besifuba, ukuqina buthakathaka noma ukukhathala, nokuvuthwa okungaphansi kokujwayelekile noma cha nhlobo.
Ukuze uqiniseke ukuthi le mithi isiza isimo sakho futhi ingabangeli imiphumela eyingozi, ingcindezi yakho yegazi kuyodingeka ihlolwe kaningi. Ungase futhi udinga ukuhlolwa kwegazi ngezikhathi ezithile. Ungaphuthelwa noma yimaphi ama-aphoyintimenti ahleliwe.
Qhubeka usebenzisa i-Hydralazine HCL powder njengoba iqondiswa, ngisho noma uzizwa kahle. Umfutho wegazi ophezulu kaningi awunayo izimpawu, ngakho-ke ngeke ukwazi ukuthi ukucindezela kwegazi kwakho kuphakame kangakanani. I-Youmay kudingeka usebenzise imithi yomshoshaphansi wegazi impilo yakho yonke.
I-Hydralazine hydrochloride powder ingaba nemiphumela emibi
Thola usizo lwezokwelapha oluphuthumayo uma unesinye salezi zibonakaliso zokuphendula okulindelekile: izinkukhu; ubunzima bokuphefumula; ukuvuvukala kobuso bakho, izindebe, ulimi, noma umphimbo.
Shayela udokotela wakho ngesikhathi esisodwa uma unomthelela ohlangothini olubi njengalokhu:
izinhliziyo ezinzima noma eziphazamisayo;
ukuvuvukala ebusweni bakho, isisu, izandla, noma izinyawo;
ukunganaki, ukushisa, ubuhlungu, noma ukuzwa okukhathazayo;
uzizwa sengathi ungadlula;
ukudideka, imicabango engavamile noma ukuziphatha;
isikhumba esikhuni, ukulimala okulula;
ukuvuthwa okubuhlungu noma okunzima;
ukuvuthwa ngaphansi kokujwayelekile noma cha nhlobo; noma
ubuhlungu obuhlangene noma ukuvuvukala ngomkhuhlane, ubuhlungu besifuba, ukuzwela noma ukukhathala.
Imiphumela emibi kakhulu engabandakanya:
ukunxanxathela, ukuhlanza, ukulahlekelwa ukudla;
isifo sohudo, ukuqothulwa;
ubuhlungu bomzimba noma ubuhlungu;
i-runny noma i-pitch eyigugu; noma
ukuhlanza okuncane noma ukukhwabanisa isikhumba.
Indlela yokuthenga i-Hydralazine HCL powder kusuka ku-AASraw
I-Hydralazine HCL (304-20-1): Umsebenzi & Isilinganiso Nemiphumela Yecala
I-Hydralazine HCL (304-20-1) esetshenziselwa ukuphatha umfutho wegazi ophezulu